Finoan'ny WKG | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Araka ny fijoroana ho vavolombelona ao amin'ny Soratra Masina, Andriamanitra dia olona iray ao amin'ny telo mandrakizay, mitovy, saingy mitovy, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Izy irery ihany no Andriamanitra marina, mandrakizay, tsy miova, tsy manam-petra, tsy mahay, mahay manaja, manaja. Izy no mpamorona ny lanitra sy ny tany, mpiaro an'izao rehetra izao sy loharanon'ny famonjena ho an'ny olona. Na dia somary tsy mahatanty aza, Andriamanitra dia mihetsika mivantana sy manokana amin'ny olona. Fitiavana sy hatsarana tsy manam-petra Andriamanitra ...
Andriamanitra, ilay Ray, no olona voalohany ao amin'ny Andriamanitra, ilay olona tsy nisy fiaviany, nateraka ny Zanaka hatrizay hatrizay ary avy amin'ny Zanaka no nitondran'ny Fanahy Masina mandrakizay. Ny Ray, izay nahary ny zava-drehetra hita sy tsy hita tamin'ny Zanaka, dia mandefa ny Zanaka mba hahazoantsika famonjena ary manome ny Fanahy Masina ho fanavaozana sy fanekena ho zanak'Andriamanitra. (Jaona 1,1.14, 18; Romana 15,6; Kolosiana 1,15-16; Jaona 3,16; 14,26; 15,26; Romana ...
Andriamanitra, ny Zanaka, dia olona faharoa ao amin'ny Andriamanitra, noforonin'ny Ray hatrizay. Izy no teny sy itovizan'ny Ray amin'ny alalany ary Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ho azy. Nirahina avy amin'ny Ray ho toy i Jesoa Kristy, Andriamanitra, nambara tamin'ny nofo hahafahantsika mahazo ny famonjena. Nandray ny Fanahy Masina izy ary naterak'i Maria Virjiny, izy dia Andriamanitra sy ny olona rehetra, ary niray fo iray ao anaty olona iray. Izy, ny zanaka ...
Ny Fanahy Masina dia olona fahatelo ao amin'ny Andriamanitra ary lasa mandrakizay avy amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Zanaka. Izy no mpampionona nampanantenain'i Jesosy Kristy fa nirahin'Andriamanitra ho an'ny mino rehetra. Mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, mampiray antsika amin'ny Ray sy ny Zanaka ary manova antsika amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanamasinana ary amin'ny alàlan'ny fanavaozana lalandava, dia mampiray antsika amin'ny sarin'i Kristy. Ny Fanahy Masina no loharanom-tsindrimandry sy faminaniana ao anaty Baiboly ary loharanon'ny firaisana ary ...
Ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny ankapobeny, dia ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny fiandrianan'Andriamanitra dia efa hita miharihary eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny fiainan'ny mpino tsirairay mankatò ny sitrapony. Ny fanjakan 'Andriamanitra dia haorina tanteraka ho lamin'izao tontolo izao aorian'ny fiverenan'i Kristy rehefa hanaiky izany ny zavatra rehetra. (Salamo 2,6-9; 93,1-2; Lioka 17,20-21; Daniela 2,44; Marka 1,14-15; 1 Korintiana 15,24-28; Apokalypsy 11,15; 21.3.22 -27; 22,1-5) Ny ankehitriny sy ny ho avy ...
Namorona ny lehilahy sy ny lehilahy ary ny olombelona Andriamanitra, tahaka ny endrik'Andriamanitra. Andriamanitra dia nitahy ny olona ary nandidy azy hitombo sy hameno ny tany. Amim-pitiavana no nanomezan'ny Tompo fahefana ho an'ity tany ity ho mpitandrina sy hanapaka ny zavaboariny. Ao amin'ny tantaran'ny fahariana, ny olona dia satroboninahitry ny fahariana; Adama voalohany. Nohefan'i Adama, izay nanota, ny olombelona dia mikomy amin'ny mpamorona azy ary manana ...
Ny soratra masina dia Tenin'Andriamanitra ara-tsindrimandry, ny fijoroana ho vavolombelona mahatoky momba ny Filazantsara, ary ny marina sy marina fambara ny fanambarana nataon'Andriamanitra tamin'ny olona. Amin'io lafiny io, ny Soratra Masina dia tsy mety ary fototra ho an'ny Fiangonana amin'ny fanontaniana rehetra momba ny fampianarana sy ny fiainana. Ahoana no ahafantarantsika hoe iza i Jesosy ary inona no nampianarin'i Jesosy? Ahoana no ahafantarantsika raha tena misy na diso ny filazantsara iray? Inona no fototry ny fahefana sy fampianarana? Ny Baiboly no ...
Ny Fiangonana, Vatan'i Kristy, no vondron'izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy sy itoeran'ny Fanahy Masina. Ny iraky ny Fiangonana dia ny fitoriana ny filazantsara, ny hampianatra izay rehetra nandidian'i Kristy, ny fanaovana batisa ary ny ahitra ny andian'ondry. Ho fanatanterahana izany didy izany, ny Fiangonana, tarihin'ny Fanahy Masina, dia mandray ny Baiboly ho mpitari-dalana ary tarihin'i Jesosy Kristy, lohan'ny velona. Ny Baiboly milaza hoe: Iza ao amin'i Kristy ...
Ny kristiana dia izay rehetra mametraka ny fitokisany amin'i Kristy. Miaraka amin'ny fanavaozana avy amin'ny Fanahy Masina, ny Kristiana dia teraka indray ary amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fananganan-janaka dia napetraka amin'ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra sy ny mpiara-belona aminy. Ny fiainan'ny kristiana dia aseho amin'ny voan'ny Fanahy Masina. (Romana 10,9-13; Galatiana 2,20; Jaona 3,5-7; Marka 8,34; Jaona 1,12-13; 3,16-17; Romana 5,1; 8,9; Jaona 13,35, 5,22; Galatiana 23) Inona no dikan'ny hoe zaza ...
Ny anjely dia noforonina fanahy. Vonona malalaka izy ireo. Ireo anjely masina dia manompo an'Andriamanitra amin'ny maha-iraka sy iraka azy, dia fanahy izay mamonjy famonjena ary hiaraka amin'i Kristy amin'ny fiverenany. Ny anjely tsy mankatò dia antsoina hoe demony, fanahy ratsy ary fanahy maloto. Fanahy ny anjely, mpitondra hafatra ary mpanompon'Andriamanitra. (Hebreo 1,14; Apokalypsy 1,1; 22,6; Matio 25,31; 2 Petera 2,4; Marka 1,23; Matio 10,1) ...
Satana dia anjely lavo, mpitarika ny hery ratsy ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Ao amin'ny Soratra Masina dia voaresaka amin'ny fomba maro samihafa izy: ny devoly, ny fahavalo, ny ratsy, mpamono olona, ​​mpandainga, mpangalatra, mpaka fanahy, mpiampanga ny rahalahintsika, dragona, andriamanitr'izao tontolo izao. Tena mikomy amin'Andriamanitra foana izy. Noho ny fitaomany, dia mamafy fifandirana sy fisolokiana ary tsy fankatoavana eo amin'ny olona izy. Efa resy ao amin'i Kristy izy ary ny fitondrany sy ny fahefany ho Andriamanitra ...
Ny filazantsara no vaovao mahafaly momba ny fanavotana amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra miorina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny hafatra dia hoe i Kristy dia maty noho ny fahotantsika, nalevina izy, natsangana tamin'ny andro fahatelo aorian'ny Soratra Masina, ary avy eo dia niseho tamin'ny mpianany. Ny filazantsara no vaovao mahafaly izay ahafahantsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny asa famonjena an'i Jesosy Kristy. (1 Korintiana 15,1: 5-5,31; Asan’ny Apostoly 24,46:48; Lioka; Jaona ...
Ny fototry ny fitondran-tena Kristiana dia ny fahatokiana sy ny fitiavana tsy fivadihana amin'ny Mpamonjintsika, izay tia antsika ary nanolotra ny tenany hamonjy antsika. Ny fahatokisana an'i Jesoa Kristy dia aseho amin'ny finoana ny filazantsara sy amin'ny asan'ny fitiavana. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia manova ny fon'ny mpino i Kristy ary mamela azy hamoa: fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahatokiana, faharetana, hatsaram-panahy, fahalemem-panahy, fifehezan-tena, fahamarinana sy fahamarinana. (1 Jaona ...
Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fahasoavana tsy manam-paharoa izay anomezan'Andriamanitra hanome ny zavaboary rehetra. Amin'ny heviny midadasika indrindra, ny fahasoavan'Andriamanitra dia aseho amin'ny asa rehetra manambara fambara ho an'ny tenany. Noho ny fahasoavana, voavonjy amin'ny ota sy fahafatesana avy amin'i Jesosy Kristy ny olona sy ny cosmos rehetra, ary noho ny fahasoavana dia mahazo hery hahalala sy hitia an 'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny olona ary hiditra ao amin'ny fifalian'ny famonjena mandrakizay ao Fanjakan'andriamanitra. (Kolosiana 1,20; ...
Ny ota dia ny tsy fanarahan-dalàna, ny fikomiana amin'Andriamanitra. Hatramin'ny fotoana nidiran'ny ota tamin'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Adama sy Eva, ny olona dia teo ambanin'ny zon'ny ota - zioga iray izay hany esorina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Ny toetran'ny olombelona manota dia mampiseho ny tenany hametraka ny tena sy ny tombontsoan'ny tenany manokana mihoatra noho Andriamanitra sy ny sitrapony. Ny fahotana dia mitarika amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra sy ny fijaliana ary ny fahafatesana. Satria samy ...
Ny finoana an'Andriamanitra dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, miorim-paka amin'ny zanany tonga nofo ary nohazavaina tamin'ny teniny mandrakizay amin'ny alàlan'ny fijoroana ho vavolombelona momba ny Fanahy Masina ao amin'ny Soratra Masina. Ny finoana an'Andriamanitra dia mahatonga ny fo sy ny sain'ny olona handray ny fanomezan'ny fahasoavana, ny famonjena. Amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy sy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, mamela antsika hanana fiarahamonina ara-panahy sy mahatoky an'Andriamanitra Raintsika ny finoana. Jesosy Kristy no mpanamboatra sy mpanafika ...
Ny famonjena dia ny famerenana amin'ny laoniny ny firaisana amin'Andriamanitra sy ny fanavotana ny voary rehetra avy amin'ny fatoran'ny ota sy ny fahafatesana. Andriamanitra dia manome famonjena tsy ho an'ny fiainana ankehitriny ihany, fa mandrakizay kosa amin'ny olona rehetra manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpanavotra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famonjena, vita amin'ny fahasoavana, nomen'ny finoana an'i Jesosy Kristy, tsy nohon'ny fahadiovana manokana na tsara ...
Ny Baiboly dia manamafy fa izay rehetra mitoetra ao amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy dia hovonjena ary tsy hisy handray azy ireo intsony amin'ny tanan'i Kristy. Ny Baiboly dia manantitrantitra fa mahatoky ny tsy fivadihan'ny Tompo sy ny fahafenoan'i Jesosy Kristy ho famonjena antsika. Manasongadina ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay ho an'ny olona rehetra koa izy io ary mamaritra ny Evanjely ho herin'Andriamanitra ho famonjena ny olona rehetra mino. Rehefa manana izany fahatokiana famonjena izany, ny mpino dia ho ...
Ny fanamarinana dia asan'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ary ny finoana no manamarina ny mpino eo imason'Andriamanitra. Araka izany, amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy dia mahazo famelan-keloka amin'Andriamanitra ny olona ary mahita fiadanana amin'ny Tompony sy Mpamonjy azy. Kristy dia ilay taranaka ary tsy hita intsony ny fanekena taloha. Ao anaty fifanarahana vaovao, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia mifototra amin'ny fototra hafa, miorina amin'ny fifanarahana hafa izany. (Romana 3, 21-31; 4,1-8; ...
Ny Sabata kristiana no fiainana ao amin'i Jesoa Kristy izay itiavan'ny mpino tsirairay ny fitsaharana marina. Ny Sabata amin'ny andro fahafito dia nandidy an'i Israely tao amin'ny Didy Folo dia alokaloka nanondro an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika ho mariky ny tena zava-misy. (Hebreo 4,3.8-10; Matio 11,28-30; Eksodosy 2-20,8; Kolosiana 11-2,16) Ny fankalazana ny famonjena ao amin'i Kristy Fivavahana dia valim-bavantsika amin'ny asa soa nataon'Andriamanitra ho antsika manana. ...
Ny fibebahana (izay adika koa hoe "fivalozana") mankany amin'Andriamanitra tsara dia fiovam-po, nentin'ny Fanahy Masina ary namaka ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ny fibebahana dia tafiditra ao anatin'ny fahatsiarovan-tena ny fahotan'ny tena iray ary miara-miaina fiainana vaovao, nohamasinin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. (Asan 'ny 2,38; Romana 2,4; 10,17; Romana 12,2) Ny fianarana hahatakatra ny fibebahana Ny tahotra mahatsiravina »dia ny filazalazana ny tovolahy iray noho ny fahatahorany lehibe azy fa natoron'Andriamanitra azy noho ny…
Ny fanamasinana dia fihetsika fahasoavana iray izay ananan'Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fahamasinan'i Jesoa Kristy amin'ny mpino ary mampiditra azy ao. Ny fanamasinana dia miaina amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesoa Kristy ary manatanteraka amin'ny alalan'ny fisian'ny Fanahy Masina ao amin'ny olona. (Romana 6,11:1; 1,8 Jaona 9: 6,22-2; Romana 2,13:5; 22 Tesaloniana 23; Galatianina) Ny fanamasinana Araka ny Concise Oxford Dictionary, ny manamasina dia midika hoe "misaraka na mitazona zavatra masina". na "avy amin'ny ota ...
Ny fiankohofana dia ny valim-bavaka avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra no vokatry ny fitiavan'Andriamanitra ary avy amin'ny fanambarany ny tenany ho amin'ny zavatra noforoniny. Eo amin'ny fanompoam-pivavahana, ny mpino dia miditra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra Ray amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy, alalàn'ny Fanahy Masina. Ny fiankohofana dia midika koa hoe laharam-pahamehana sy amim-pifaliana ho an'Andriamanitra amin'ny zava-drehetra. Miseho amin'ny toetra sy fihetsika izany ...
Ny batisanny rano dia mariky ny fibebahan'ny mpino, famantarana fa manaiky an'i Jesosy Kristy izy ho Tompo sy Mpanavotra dia ny fandraisana anjara amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny fanaovana batisa "amin'ny Fanahy Masina sy ny Afo" dia manondro ny asa fanavaozana sy fanadiovana ny Fanahy Masina. Ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia mampihatra ny batisa amin'ny alàlan'ny fandroboka. (Matio 28,19:2,38; Asan’ny Apostoly 6,4:5; Romana 3,16: 1-12,13; Lioka 1:1,3; 9 Korintiana; Petera-; Matio ...
Ny Fanasan'ny Tompo dia fahatsiarovana ny nataon'i Jesosy taloha, sy tandindon'ny fifandraisantsika aminy ankehitriny, ary fampanantenana ny hataony amin'ny ho avy. Isaky ny mankalaza ny fanasan'ny Tompo isika dia mandray mofo sy divay ho fahatsiarovana ny Mpamonjintsika ary manambara ny fahafatesany mandra-pihaviny. Ny sakramenta dia fandraisana anjara amin'ny fahafatesana sy fitsanganan'ny Tompontsika, izay nanolotra ny vatany ary nandatsaka ny rany ka ho voavela heloka isika ...
Ny fitantananana ara-bola kristiana dia midika ny fizahana ny harena manokana amin'ny fomba izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahalalahan-tanana. Anisan'izany ny adidy hanome ny ampahany amin'ny vola manokana ho an'ny asan'ny Fiangonana. Ny iraka nomen'Andriamanitra ny fiangonana dia ny fanomezana fitoriana ny filazantsara sy ny fiompiana ny andian'ondry. Ny fanomezana sy fanomezana manome taratra ny fankalazana, ny finoana, ny fankatoavana ary ...
I Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana. Manambara ny sitrapon'ny Ray amin'ny Fiangonana amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izy. Amin'ny alàlan'ny Soratra Masina, mampianatra sy manome alalana ny fiangonana hanompo ny filan'ny fiangonana ny Fanahy Masina. Ny Fiangonana Eran-tany manerantany dia miezaka ny hanaraka ny fitarihan'ny Fanahy Masina eo amin'ny fikarakarana ny fiangonany ary koa amin'ny fanendrena loholona, ​​diakona, ary mpitarika. (Kolosiana 1,18:1,15; Efesianina 23: 16,13-15; Jaona; ...
Ny faminaniana dia manambara ny sitrapon'Andriamanitra sy ny drafitra ho an'ny olombelona. Ao amin'ireo faminaniana ara-baiboly dia nanambara Andriamanitra fa voavela ny heloky ny olombelona amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana amin'ny asa famonjena nataon'i Jesoa Kristy. Ny faminaniana dia manambara an'Andriamanitra ho mpamorona mahery indrindra sy mpitsara ambonin'izy rehetra ary manome toky ny olombelona amin'ny fitiavany, ny fahasoavany ary ny fahatokiany ary manosika ny mpino hiaina hanana fiainana tia an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. (Isaia 46,9-11; Lioka 24,44-48; ...
Araka ny nampanantenainy dia hiverina eto an-tany i Jesosy Kristy hitsara sy hanapaka ny firenena rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho hita eo ny fiaviany faharoa amin'ny fahefana sy ny voninahitra. Ity hetsika ity dia manomboka ny fitsanganana amin'ny maty sy ny valisoan'ny olomasina. (Jaona 14,3; Apokalypsy 1,7; Matio 24,30; 1 Tesaloniana 4,15:17 - 22,12; Apokalypsy) Hiverina ve i Kristy? Inona no heverinao fa mety ho hetsika lehibe indrindra izay mety hitranga eo amin'ny sehatra izao tontolo izao? ...
Ny lovan'ny mpino dia fanavotana sy fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy amin'ny maha-zanak'Andriamanitra amin'ny fifandraisana amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny raim-pianakaviana dia efa mamindra ny mpino ao amin'ny fanjakan'ny zanany; hotazonina any an-danitra ny lovany ary hatolotra feno tanteraka izy amin'ny fihavian'i Kristy fanindroany. Ny olo-masina tafatsangana dia hiara-manjaka amin'i Kristy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. (1 Jaona 3,1: 2-2,25; 8:16; Romana 21: 1,13-7,27; Kolosiana 1:1,3; Daniela 5; Petera-; ...
Amin'ny faran'ny tontolo, hanangona ny velona sy ny maty rehetra eo anatrehan'ny seza fiandrianan'i Kristy any an-danitra Andriamanitra. Hahazo voninahitra mandrakizay ny olo-marina, fanamelohana tsy andriamanitra ao anaty dobo mirehitra. Ao amin'i Kristy ny Tompo dia manome fahasoavana sy fandaharana ho an'ny rehetra, ao anatin'izany izay toa tsy nino ny filazantsara rehefa maty. (Matio 25,31: 32-24,15; Asan’ny Apostoly 5,28:29; Jaona 20,11: 15-1; Apokalypsy 2,3: 6-2; 3,9 Timoty; Petera; ...
Ny helo dia ny fisarahana sy ny fampisarahana amin'Andriamanitra izay nofidin'ny mpanota tsy mety lo. Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny afobe dia antsoina hoe "dobo mirehitra", ny "maizina" ary Gehenna (taorian'ny Tal Hinnom akaikin'i Jerosalema, toerana fanakaloanana ho fandavana). Ny helo dia voalaza fa fanasaziana, fijaliana, fampijaliana, faharavana mandrakizay, fidradradradrana sy fikitroha-nify. Scheol sy Hades, dia voadika matetika miaraka amin'ny "helo" sy "fasana" avy amin'ny Baiboly ny voambolana roa ...
Ny "lanitra" amin'ny maha-Baiboly dia mamaritra ny toerana nofidin'Andriamanitra, ary koa ny anjara mandrakizay amin'ny zanak'Andriamanitra voavotra rehetra. Ny hoe "any an-danitra" dia midika hoe: mijanona ao amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy izay tsy misy fahafatesana intsony, alahelo, fitomaniana ary fanaintainana. Ny lanitra dia nofaritana ho "fifaliana mandrakizay", "bliss", "fiadanana" ary ny "fahamarinan'Andriamanitra". (1 Mpanjaka 8,27: 30-5; Deoteronomia 26,15:6,9; Matio 7,55; Asa. 56-14,2; Jaona 3-21,3; Apokalypsy 4-22,1; 5-2; . ...
Ny fanjakana manelanelana dia ny fanjakana izay misy ny maty mandra-pitsanganan'ny vatana. Miankina amin'ny fandikana ny soratra masina mifandraika amin'izany dia samy manana ny fomba fijeriny ny toetran'ity fanjakana manelanelana ity. Misy ny teboka sasany milaza fa niaina izany fanjakany izany tamin'ny maty, ny hafa kosa efa lasa ny fahatsiarovan'izy ireo. Ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia mino fa tokony hajaina daholo ny hevitra roa. (Isaia 14,9: 10; Ezekiela ...
A creed (credo, avy amin'ny teny latina "Mino aho") dia famolavolana famolavolana finoana. Te-hanao lisitra ireo fahamarinana manan-danja, hazavao ireo fanabeazana, fampianarana manasaraka amin'ny diso. Notazonina matetika mba ho mora tsianjery. Misy toerana maromaro ao amin'ny Baiboly manana toetra mampiavaka ny fahitana. Noho izany, i Jesosy dia mampiasa ny tetika miorina amin'ny Deoteronomia 5: 6,4-9. Manao ny ...